Chris Brogan Blog Rocked RockIndiana | Martech Zone
Chris Brogan Noraisin'ny BlogIndiana
Asabotsy, Aogositra 15, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
"Fantatro izao ny antony itiavanao fankahalana ahy!", Hoy ny fihiakan'i Chris (ala Limp Bizkit) tamin'ny fotoana iray tao anaty adihevitra natao. Ny fanontaniana dia miresaka momba ny famoahana ireo mankahala eo amin'ny tontolon'ny media sosialy. Ny tena izy dia, rehefa manangana marika manokana ny olona an-tserasera ary mampivelatra ny feony sy ny fahaizany manokana amin'ny indostria… ny olona sasany dia mankahala azy ireo amin'izany. Tsy isalasalana fa misy olona mankahala an'i Chris Brogan… saingy raha nanao izany izy ireo dia noho ny talenta nananany.
Chris Brogan Bloged RockIndiana.
Chris dia manana deck kely mampihetsi-po sy fampisehoana olona - ao anatin'izany ny referansy kolontsaina pop wacky (ao anatin'izany ny Fergy!), Ny fifampiraharahana amin'ny vahoaka (manameloka anay noho ny fisian'ny mpihazakazaka mpivady ao amin'ny efitrano!), Ary famelabelaran-kevitra vita amin'ny poloney Misy talenta tsy mampino hitako amin'ireo mpandahateny toa an'i Chris hitako ao amin'i Malcolm Gladwell, Seth Godin sy ny hafa… ny fahaizana mandray olana sarotra sy sarotra ary manazava azy tsotra.
Nataon'i Brogan izany tamin'ny fitohizan'ny marika maoderina sy ny fomba nifandraisan'ny media sosialy, avy Fanentanana amin'ny hetsika maharitra. Vakio manontolo eo amin'ny paositra ny andinindininy, ity ny kasipeo:
fanentanana - Fampiasana marketing mahomby hampahafantarana anao, ny vokatrao, na ny serivisinao.
Attention - Fampiasana haino aman-jery sosialy ahafahan'ny olona manana fomba handraisana anjara.
Engagement - Fifandraisana maharitra eo aminao sy ny fiaraha-monina misy anao.
famonoana - Ny fiovam-po… ny fisintomana, ny fisoratana anarana, ny fividianana, sns.
fanitarana - Ny fotoana aorian'ny famonoana mba hampiroboroboana ny hetsika sy ny valiny.
I Chris dia nanao ny asa saro-pantarina sy sarotra teto amin'ny famaritana ny fizotrany, ka ampiako fotsiny ny 2 centsako. (Halako ny manao an'ity… mahatonga ahy ho toy ny manao piggyback fotsiny… inoako fa izaho!) Mba hamadihana ity avy amin'ny tohiny ho tsingerina dia manampy aho Analysis.
Heveriko fa ny famakafakana dia fanalahidy… na eo am-piandohana na any amin'ny faran'ny fizotran'izany mba hahafahan'ny orinasa manomboka ny fizotrany amin'ny alàlan'ny herin-tsoavaly maro kokoa - ary koa manadio sy manatsara ny fomba isaky ny mandeha. Ilaina ny fandrefesana ny valiny ka takatry ny orinasa ny toerana hanatsarana ny loharanon-karena voafetra ho an'ny fiatraikany lehibe.
Tsy mbola namaky ny bokin'i Chris 'sy Julian aho - manantena ny haka azy io aho ary mahita ny fomba filalaovana sy ny fandrefesana ny paikady amin'ny fitohizany.
Aug 16, 2009 amin'ny 2: 27 AM
Tena tsara fanahy hoy ianao, Doug. Nihomehy mafy aho taloha, ary feno fankasitrahana ny fananako anao tao amin'ny efitrano, ho toy ny iray amin'ireo superstars eo an-toerana. Manantena aho fa mahasoa izany, ary manantena ny hahita anao tsy ho ela aho. :)
Aug 17, 2009 amin'ny 2: 36 AM
Tsy afaka miandry ny hiampitan'ny lalantsika indray!
16 Aogositra 2009 amin'ny 11:18 PM
Hey Doug, ekeko fa dingana lehibe ny manampy ny Fanadihadiana, saingy heveriko fa nametraka izany tamin'ny toerana tsy izy ianao. Hanao ny fanadihadiana aho aorian'ny famonoana ary alohan'ny fanitarana, satria ny fanitarana dia tena teboka fanombohana, fa tsy teboka fiafarana.
Aug 17, 2009 amin'ny 2: 38 AM
Miaraka aminao aho Tim. Tena niady mafy aho mba tsy hampiditra ny famakafakana eo anelanelan'ny dingana rehetra! Geek tanteraka aho momba ny fandrefesana sy ny fanaraha-maso. Ny ankamaroantsika dia be atao amin'ny fanatanterahana ka tsy mandany fotoana matetika isika.
Tena nahafinaritra ny nandany fotoana taminao tamin'ity herinandro ity, Tim! Raha te-hanao bilaogy vahiny ianao - azafady manantona!